Budata Mozilla Firefox maka Windows
Free Budata maka Windows (50.20 MB)
Budata Mozilla Firefox,
Firefox bụ ihe nchọgharị intaneti mepere emepe nke Mozilla mepụtara iji mee ka ndị ọrụ ịntanetị na-agagharị na weebụ ngwa ngwa na ngwa ngwa. Mozilla Firefox, nke a na-enye ndị ọrụ kpamkpam nefu, yana mmelite kachasị ọhụrụ; Ọ ghọọ ezigbo nkwenye megide ndị asọmpi ya dịka Google Chrome, Opera na Microsoft Edge nihe gbasara ọsọ, nchekwa na mmekọrịta.
Ihe nchọgharị intaneti, nke jisiri ike nweta ekele nke ndị ọrụ ịntanetị na-ekele ya interface dị mfe ma dị mfe iji, na-enye ndị ọrụ ohere inwe nchebe site na nhọrọ nchekwa na nzuzo ya. Firefox, nke na-adọta uche ndị mmepe dịka ọ bụ ngwanrọ mepere emepe, na-eweta ngwọta ọhụrụ maka mkpa onye ọrụ yana mmelite ọ bụla.
Firefox, nke Mozilla wepụtara site na toolbars na-enweghị isi, guzobere ocheeze nime obi ọtụtụ ndị ọrụ dị ka ihe nchọgharị firstntanetị mbụ iji jiri usoro ihe nchọgharị taabụ nabatara ndị asọmpi ndị ọzọ. Na ijikọta nhọrọ nhazi niile nokpuru otu nchịkọta nhọrọ dị mfe, ihe nchọgharị ahụ na-enye ndị ọrụ niile ohere ịgbanwe ntọala ha nwere ike ịchọrọ.
Firefox, nke bụ nke mbụ jiri incognito windo ma ọ bụ zoo atụmatụ njirimara nke mepụtara maka ndị ọrụ na-achọghị ịchọgharị na ịntanetị na-enweghị aha ma hapụ ihe ọ bụla metụtara, nwere ihe ịga nke ọma ninweta ọtụtụ nime ndị asọmpi ya na mpaghara a ma setịpụrụ ihe atụ maka ha. Notu oge ahụ, ihe nchọgharị ahụ, nke na-echebe ndị ọrụ ịntanetị nwere njirimara dịka teknụzụ nchedo ohi, antivirus na mwepu malware, nchedo ọdịnaya, so nime ndị kachasị mma na klaasị ya ma a bịa na nchekwa.
Ihe nchọgharị intaneti, nke dị maka ndị ọrụ na desktọọpụ na ngwaọrụ mkpanaka, na-enye gị ohere ịnweta data niile ịchọrọ nụlọ, ọrụ na nokporo ụzọ, nihi atụmatụ mmekọrịta ya dị elu, na-enye gị ohere ịga nihu gị rụọ ọrụ noge ọ bụla. Na mgbakwunye, ị nwere ike ịhazi ihe nchọgharị ahụ, nke na-enye nkwụnye na nkwado isiokwu maka mmasị gị.
Nihi ya, ọ bụrụ na ịchọrọ nchọgharị nefu, nke a pụrụ ịdabere na ya, ngwa ngwa ma dị ike nke nwere ike ịbụ ihe ọzọ na ihe nchọgharị ị na-eji, ị ga-anwale Firefox, nke Mozilla mepụtara.
Ebumnuche 6 Iji budata Nchọgharị Firefox
Ndị a bụ ụfọdụ ihe kpatara iji budata ihe nchọgharị Firefox ngwa ngwa, nchekwa na nefu:
Ebumnuche, nyocha ngwa ngwa: Chọọ site na ebe adreesị, Nchọpụta njin nhọrọ, Atụmatụ ọchụchọ smart, Chọọ na ibe edokọbara - akụkọ ihe mere eme na imeghe taabụ
Dịkwuo gị arụpụta: -arụ ọrụ na Google ngwaahịa. Wuru na-nseta ihuenyo ngwá ọrụ. Njikwa ibe edokwubara. Ndụmọdụ adreesị akpaaka. Ngakọrịta-ngwaọrụ mmekọrịta. agụ mode. Supee nlele. Tab ntụtụ
Kwusaanụ, kesaa ma kpọọ: Gbochie vidiyo na akpaaka na mbido akpaaka. Foto dị na foto. Onye ọrụ akọwapụtara ọdịnaya na taabụ ọhụrụ. Ekekọrịtala njikọ.
Chedo nzuzo gị: Gbochie kuki ndị ọzọ. Mkpisiaka mkpoko igbochi. Na-egbochi ndị na-egwuputa ihe na crypto. Ọnọdụ incognito. Nkwupụta nchedo onwe onye.
Dowe ozi gbasara gị gbasara onwe gị. Wuru na-paswọọdụ faili. Ikpochapụ akụkọ ihe mere eme. Mpempe akwụkwọ akpaaka. Akpaaka mmelite.
Hazie ihe nchọgharị gị: Gburugburu. ọnọdụ gbara ọchịchịrị. Ọbá akwụkwọ ngwa mgbakwunye. Hazie ntọala nyocha ọchụchọ. Na-agbanwe nhazi taabụ ọhụrụ.
Mozilla Firefox Ụdịdị
Nha faịlụ: 50.20 MB